Vehivavy nanamontsana ny zavabita tsara indrindra erantany tamin’ny fifaninanana fitsotsorana maka aina ela indrindra tao Montenegro · Global Voices teny Malagasy
Ny fitsaratsaram-poana an'ireo Monténégrins ho olona kamo no resahan'ilay fifaninanana
Voadika ny 27 Aogositra 2021 8:10 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Português, English
Dubravka “Duda” Aksić nandray anjara tamin'ilay Fifaninanana Mitsotsotra 2021. Pikantsary nalaina tamina lahatsary Facebook, fanomezana am-pitiavana avy amin'ny PBS Radio Television Montenegro (RTCG).
Tao amin'ny Meta.mk no navoaka voalohany ity lahatsoratra ity. Dika iray nokiraina no naverina navoaka etoana araka ny fifanarahana hifampizara votoaty nifanaovan'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation.
Mandritra ny herinandro farany amin'ny vola Aogositra 2021, ny Brezna Ethno Village Montenegro, toerana marolafy fandraisambahiny ao amin'ny vohitra Donja Brezna ao Montenegro, dia nikarakara ilay fifaninanana nentindrazana “fitsotsorana maka aina”. Fanimpolony izao, nohadrohadroan'ilay fifaninanana ny fitsaratsaram-poana an'ireo Monténégrins ho olona kamo. Asaina mitsotsotra mandritra ny ora marobe ireo mpifaninana, izay nivadika ho andro maro avy eo.
Ny onjampeom-panjakana ao Montenegro (RTCG) nitatitra fa, na montsana tamin'ny 24 Aogositra aza ny zavabita ela indrindra erantany, mbola mitohy mifaninana ireo telo tavela farany, izany hoe notohizan-dry zareo ny fitsotsorana mba hahazoana ilay loka 300 euros (manodidina ny 353 dôlara amerikana).
Radoje Blagojević, tompon'ilay vohi-drazana no sady mpikarakara ny fifaninanana, dia nilaza tamin'ny RTCG fa mpifaninana telo no nahamontsana “ny zavabita tsara indrindra erantany, zavabita tamin'ny roa taona lasa” .
Ny fanamontsanana ilay zavabita dia angamba vokatra mivantana azo avy amin'ny fiovàna tao anatin'ireo fepetra, raha noharina tamin'ireo taona tany aloha—fahafahan'ireo mpifaninana mamonjy trano fidiovana.
“Aorian'ny ora 8 nifaninanana, dia omena alàlana ry zareo hamonjy trano fidiovana, araka izany dia mety ho mora ny nanamontsana ilay zavabita tamin'ny roa taona lasa, izay 52 ora nitsorana tsy niato. Tamin'izany, tsy nahazo alàlana nandeha namonjy trano fidiovana ry zareo. Tena tsy vitako izany, noho izany dia deraina ry zareo,” hoy i Blagojević.
Sary an'ny pejy Facebook “Ethno Village Montenegro”. Mivaky toy izao ny soratra ao anatiny: ” Duda Aksić no mpandresy, tamin'ny ora 117. 5 minitra talohan'io no niarina am-panajàna i Nikola Bosković, ary nahavita ora 115 i Marko Vučković. Mpandresy ara-môraly daholo ry zareo ireo. Arahabaina i Duda! Fifaninanana Fitsotsorana Maka Aina tao amin'ny “Ethno Village Montenegro”. Zavabita vaovao – 117 ora na 5 andro.”
Lehilahy tanora roa avy ao Nikšić sy vehivavy iray avy ao Podgorica no nifaninana ho tompon'ny zavabita vaovao tsara indrindra. Ny 25 Aogositra, nivoaka ny anaran'ny mpandresy, ramatoa iray avy ao an-drenivohitra, Dubravka “Duda” Aksić.
Nahavita nitsotra nandritra ny 117 i Aksić . Nitsangana 5 minitra talohany i Nikola Bošković, ilay iray hafa tonga hatramin'ny famaranana, raha ilay fahatelo tamin'ny famaranana kosa nitsahatra ora roa talohan'izy ireo, hoy ny notaterin'ny gazety Vesti.
Nolazain'ilay mpandresy tamin'ny Vijesti fa:
Zaista je bilo teško, posebno od tri sata noćas kada je počela jaka kiša. Bilo je hladno, mada smo se pokrili dodatnim ćebadima i prostirkama. Inače nam je bilo dosadilo i postalo nam je bilo naporno da ležimo, ali prizivali smo kišu da ona presudi, kao što se i desilo. Da nije bilo kiše sigurno bismo još ostali.
Tena faran'izay sarotra, indrindra fa tamin'ny 3 ora maraina, nanomboka nisy orana vaventy. Nangatsiaka, na dia nampiasa lamba firakotra fanampiny aza izahay. Raha tsy izay dia mety ho lasa nanahirana ny hanohy, ary ny vatana nanomboka naharary arakaraky ny nitsorana, araka izany dia nandramanay ny niantso orana mba ho izy no hitsara, ary dia izay no nitranga. Raha tsy noho ny orana, dia mety mbola nijanona ora misimisy izahay.
Talohan'ny nifaranan'ilay fifaninanana, nakarin'ireo mpikarakara ho 350 Euros ny loka voalohany (412 dola eo ho eo).
Nambaran'i Duda Aksić tamin'ny Vijesti fa nieritreritra izy ny hampiasa ilay vola hanaovana lanonana miaraka amin'ireo nàmany sy hividianana zavatra hotahiriziny ho fahatsiarovana an'ilay fifaninanana, izay nampiseho taminy fa tsy mora velively ny mitsotratsotra fotoana ela.
Ampahany amin'ny fomba aman-mpanao an-tanandehibe ao amin'ilay faritra
Ny fitsaratsarampoana an'ireo Monténégrins ho olona kamo dia ampahany anatin'ny finoana niraisana tao anatin'ireo firenena nandrafitra an'i Yôgôslavia fahiny, izay mbola ahitàna ihany koa an'ireo vazivazy mifototra amin'ireo fitsaratsarampoana an'ireo vondrom-piarahamonina ara-poko sy ireo mponina amina faritra manokana ho fetsifetsy, ratsy, kahidy, mpieboebo, mpankafy revirevy, sns .
Ohatra amin'ny karazan'io hanihany io ireo Didifolon'ny Monténégrins (Deset crnogorskih zapovjedi) izay mampiasa ny endriky ny Didy Folon'ny Baiboly. Tsy fantatra ny anaran'ny mpanoratra azy.
Sary hatsikana iray miparitaka be misy ireo Didy Folon'ny Monténégrins.
Čovjek se rodi umoran i živi da bi se odmar’o
Ljubi svoj krevet ka’ samoga sebe
Odmaraj se danju, da noću možeš spavat’
Ne radi – rad ubija
Ako vidiš nekog’ đe se odmara – pomozi mu
Radi manje no što možeš, a ono što možeš prebači na drugoga
U ‘ladu je spas – od odmaranja još niko nije crka’
Rad donosi bolest – ne umri mlad
Kad slučajno želiš radit’ – sjedi, pričeka, vidjećeš, proći će te
Kad vidiš da jedu i piju – primakni se, kad vidiš đe rade – izmakni se da ne smetaš
Reraka hatreo am-pahaterahana ny olona ary velona mba hiala sasatra.
Tiavo ny fandrianao tahaka ny fitiavanao ny tenanao.
Makà aina mandritra ny andro, mba hahafahanao matory amin'ny alina.
Aza miasa — mahafaty ny asa.
Raha mahita olona miala sasatra ianao, ampio izy.
Miasà kely araka izay tratra, ary raha azonao atao dia omeo ho an'ny hafa.
Eo am-pialofana no hahitanao ny famonjena — tsy nisy maty noho ny fialàna sasatra.
Mitondra aretina ny asa — aza mety ho faty tanora.
Raha te-hiasa ianao, mipetraha aloha, miandrasa ary hohitanao fa ho afaka izany.
Rehefa mahita olona mihinana sy misotro ianao, manatona an-dry zareo. Rehefa hitanao fa miasa ry zareo, mihatakataha mba tsy hanelingelina azy ireo.
Malaza ho mahery fo sy ambony toetra ihany koa ry zareo Monténégrins, ary nitompoan-dry zareo io karazana hadrohadro io, nampiasainy ho toy ny endrika hita maso eny amin'ireo fahatsiarovana (mugs, t-shirts, afisy) ary hatramin'ireo sary mahatsikaiky anaty aterineto aza.
Iray amin'ireo vazivazy marobe ankafizina tenenin'ireo Monténégrins ihany koa ny momba ny fahasarotan'ny zavatra atrehana amin'izany mitsotsotra izany:
Snimao Spillberg film u Crnoj Gori, pa su mu trebali neki statisti. I tako uzme on dvojicu Crnogoraca, i objasni im da im je jedini zadatak da leže ispod jednog drveta.
I tako Crnogorci radili dva dana, kad im trećeg Spillberg reče da bi se zbog nove scene morali premjestiti pod drugo drvo.
Nato će mu stariji Crnogorac: ‘Ej Spilberže, Spilberže mi smo statisti i glumci, al’ bogumi kaskaderi nijesmo!’
Steven Spielberg, Amerikàna mpamokatra sarimihetsika, dia nandrakitra sarimihetsika tao Montenegro ary nanasa ireo mponina tao an-toerana ho haingon-tsehatra. Nanakarama Monténégrins roa izy sady nanazava tamin'izy ireo fa ny mitsotsotra eo ambany hazo iray no asa ho ataon-dry zareo.
Araka izany dia niasa nandritra ny andro roa ireo Monténégrins. Tamin'ny andro fahatelo, nilazàn'i Spielberg izy ireo fa ho an'ny sehatra vaovao dia mila mifindra mamonjy hazo iray hafa ry zareo.
Novalian'ilay Monténégrin iray efa zokinjokiny hoe: ” Indrisy r'Ing. Spielberg, tena haingon-tsehatra marina tokoa sy mpilalao moa izahay, fa tsy “cascadeurs”!”